CryptoKittie, CryptoKitties, Download, Downloads, maimaim-poana, lalao, lalao, lalao, Kryptokoťátka, Download, Download, maimaim-poana
Ny lazan'ny mpilalao CryptoKitties dia tsy mbola nisy toy izany, ka azo adika malalaka toy ny CryptoKitty. Ny lohatenin'ity lohateny ity dia natomboka tamin'ny mondialy tamin'ny herinandro lasa teo ary tamin'ny herinandro dia nahazoana $ 3 tapitrisa ny mpamorona, na ny 65 amin'ny satro-boninahitra an-tapitrisany.
Tena lalao tsy misy dikany izany. Mividy kisary virtoaly ny mpampiasa ary miambina ny fomba itomboany.
Ny anarana hoe "crypt" dia hita ao amin'ny anarana satria mety ho haingana ny hampivelatra ny lalao ho an'ny vola madinika - ambadiky ny crypt of ethereum. Ity no lohatenin'ny bitcoins malaza, raha miova kosa ny vola madinika amin'ny vola euro.
Momba ny milalao GamesChat.online